St. Lucia - Chokwadi uye Statistics | Hugari hweSanta Lucia
Saint Lucia, iyo yakava nyika yakazvimirira / nyika musi waFebruary 22, 1979.
Guta guru (Castries) iri munzvimbo yekuchamhembe kwechitsuwa uye inomiririra makumi mana muzana evazhinji.
Dzimwe nzvimbo huru dzevagari dzinosanganisira Vieux-Fort uye Gros-Islet.
Mamiriro ekunze uye mamiriro ekunze
St Lucia ine inopisa, inopisa mamiriro ekunze gore rose, yakaenzana nemhepo yekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva. Kupisa kwakanyanya pagore kunofungidzirwa kubva pa77 ° F (25 ° C) uye 80 ° F (27 ° C).
Hutano hwehutano hwakapihwa munyika yese. Kune makumi matatu nematatu (33) Health Centres, matatu (3) zvipatara zveveruzhinji, imwe (1) yechipatara chakazvimirira, uye imwe (1) chipatara chepfungwa.
Mwaka wekudzidza unotanga kubva munaGunyana uye unopera muna Chikunguru. Mwaka wakakamurwa kuita mazwi matatu (Nyamavhuvhu kusvika Zvita; Ndira kusvika Kubvumbi naKubvumbi kusvika Chikunguru). Kusumirwa kuchikoro chechitsuwa kunoda kupihwa kwezvinyorwa zvevadzidzi uye tsamba dzekupinda kubva kuzvikoro zvavo zvakapfuura.
Mitambo yakakurumbira inotambwa pachitsuwa kiriketi, nhabvu (nhabvu) tenisi, volleyball, uye kushambira. Vatambi vedu vanozivikanwa zvikuru ndiDaren Garvin Sammy, Kaputeni weWest Indies Twenty20 Chikwata; Lavern Spencer, kukwirira kwepamusoro uye Dominic Johnson, pole vault.
Iyo Pitons makomo maviri anoputika nyika yedu chaipo World Heritage Site muSt Lucia, yakabatana negeji inonzi Piton Mitan. Iwo maviri Piton Makomo pamwe ndiyo inonyanya kutora mifananidzo pane chitsuwa. Iyo yakakura yemakomo maviri aya inonzi Gros Piton uye imwe yacho inonzi Petit Piton.
Iyo inozivikanwa Sulfur Springs ndiyo inopisisa uye inonyanya kushanda geothermal nzvimbo muChidiki Antilles. Iyo paki ndeye mahekita makumi mana uye inotumirwa seCararibbean chete inomhanya-in-volcano. Kune madziva anopisa akaitwa nevanhu uko vagari venzvimbo pamwe nevashanyi vanowanzo fanana nezvekupora zvinhu zvemvura ine mineral-rich.
Saint Lucia ine musiyano wekuva nehuwandu hwepamusoro hweNobel Laureates per capita munyika. Derek Walcott akakunda mubairo weNobel muLiteru muna 1992 uye Sir Arthur Lewis akakunda Mubayiro weNobel muEconomics muna 1979. Vakahwina vaviri vakagovana zuva rimwe chete rekuzvarwa kwaNdira 23, makore gumi nemashanu chete akapatsanurwa.
Kuwanda kwevanhu: Vanosvika 183, 657
Nzvimbo: 238 sq mamaira / 616.4 sq km
Mutauro Rwechokwadi: Chirungu
Mutauro Wemuno: ChiFrench ChiColeole
GDP Pamwe Capita: 6,847.6 (2014)
Mari: Eastern Caribbean Dollar (EC $)
Kiwango chekutsinhana: US $ 1 = EC $ 2.70
Nzvimbo yenguva: EST +1, GMT -4